Maninona ianao no tokony hisoratra anarana anio | Martech Zone
Maninona ianao no tokony hisoratra anarana anio
Zoma, Martsa 5, 2010 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Isan'andro, Martech Zone mandefa mailaka amin'ny alàlan'ny CircuPress izay manova ny sakafon'ny bilaogy ho lasa mailaka HTML voalamina tsara. Olona an-jatony vitsivitsy monja no manararaotra izany - ampahany amin'ny mpamaky an'ity bilaogy ity isan'andro. Tsy maninona… ny akany ary mamelona ireo izay maniry izany. Tsy manandrana mampitombo ny lisitra amin'ny fomba artifisialy aho, tena mitazona izany ary manao fika ho an'ireo izay maniry ny bilaogiko ao anaty boaty.
Ny mailaka dia fantsom-barotra marketing. Mpisolovava lehibe amin'ny marketing mailaka miorina amin'ny fahazoan-dàlana aho saingy mino ny ankamaroan'ny orinasa mampiasa mailaka tsy mandaitra.
Ireo mpivarotra mailaka dia tsy mandrefy ny azy ireo fitazonana lisitry ny mailaka, tsy mijery afa-tsy ny isan'ireo ao anaty lisitra izy ireo amin'ny fotoana iray. Ny fahazoana ny lisitrao dia mety mihoatra ny fihazonana anao. Raha mahazo famandrihana be dia be ianao dia mila manamboatra zavatra haingana kokoa fa tsy aoriana.
Ireo mpivarotra mailaka dia mino fa mampino izany ambany ny tahan'ny fisokafana sy ny fiovam-po tsara rehefa ambony indostria izy ireo eo ho eo ny. Ry vahoaka, ny tahan'ny click-through 4% amin'ny mailaka dia tahan'ny tsy fahombiazana 96% fa tsy zavatra hankalazana.
Ireo mpivarotra mailaka matetika dia manana kalandrie izay mitaky azy ireo hamoaka, na inona na inona votoatiny na tsia. Mahazo mailaka ao anaty boaty mailaka aho isan-kerinandro ary manontany tena mafy aho hoe ahoana no niheveran'ny orinasa fa misy zavatra manitikitika ampy handefasana azy.
Ireo mpivarotra mailaka dia mino matematika mailaka: Raha olona 10 no nividy tamin'ny lisitra nataoko 1,000 tamin'ny mailaka fanaonay isan-kerinandro, azoko atao ny manome indroa ny varotra amin'ny mailaka 2 isan-kerinandro. Tahaka ny fanontana vola izany. Tsia… tsia. Ny mailaka tsy dia misy dikany dia mety hanome fitomboan'ny varotra, saingy amin'ny farany dia ho very ny mpamandrika sarobidy.
Na dia ny vidin'ny marketing amin'ny mailaka milentika, mbola mandany fotoana betsaka amin'ny orinasa ary misy vola handefasana mailaka. Tsy mbola nanandrana nanosika ny mailako aho na nampiakanjo azy satria tsy azoko antoka hoe hahomby amin'ny mpamaky izany. Angamba raha afaka manana atiny voatokana ao amin'ny mailaka eny amoron-dàlana aho - fa tsy handefa mailaka mampidi-doza aho mba hanandramana hahazo maso hafa vitsivitsy.
Ny zavatra tsara indrindra azonao atao ho an'ny orinasa mandefa mailaka ratsy dia ny Unsubscribe. Aza miandry ny mailaka hihatsara - andefaso hafatra anio. Diovy ny boaty fampidirana anao.
Tags: kofehylisitry ny mpanjifa mailakamailakalisitry ny mpanjifaUnsubscribe